विन्डोज को लागी फेसटाइम डाउनलोड गर्नुहोस् 10 पीसी, डेस्कटप & ल्यापटप
1 Windows पीसी र ल्यापटप 32bit लागि डाउनलोड फेसटाइम – 64बिट
1.1 Windows को लागि आवेदन:
1.2 फेसटाइम विशेषताहरु:
1.3 फेसटाइम को Coolest सुविधाहरू
2 फेसटाइम लागि आवश्यकताहरू:
2.0.1 फेसटाइम इन्टरफेस:
Windows पीसी र ल्यापटप 32bit लागि डाउनलोड फेसटाइम – 64बिट
पीसी को लागी फेसटाइम डाउनलोड गर्नुहोस्नमस्कार फेसटाइम Addicted! तपाईं फेसटाइम अनुप्रयोगको ठूलो प्रशंसक छन् र आफ्नो iPhone र मैकबुक मा प्रयोग गरिएको छ भने त तपाईं पनि यस अनुप्रयोगले तपाईँको सञ्झ्याल पीसी मा पाउन सक्छ.
पीसी Windows को लागि फेसटाइम 10
Windows को लागि फेसटाइम 8
Windows ल्यापटप लागि फेसटाइम
Windows को लागि डाउनलोड फेसटाइम
Windows को लागि डाउनलोड फेसटाइम 8.1
Windows को लागि डाउनलोड फेसटाइम764 बिट
Windows को लागि फेसटाइम7ल्यापटप
Windows को लागि फेसटाइम 10 cnet
Windows को लागि फेसटाइम 10 पीसी
विन्डोज कम्प्युटरहरूको लागि फेसटाइम
तरिका तपाईंलाई केही चाल पालना गर्न आवश्यक डाउनलोड गर्न र तपाईँको सञ्झ्याल पीसी मा फेसटाइम स्थापना.
त्यसैले यो लेख सबै आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ जो तपाईं कसरी सिकाउन हुनेछ डाउनलोड र फेसटाइम स्थापना on Non-iOS platforms such as Windows 7, 8 र विन्डोज 10.
FaceTime is one of the most prominent Apple’s video and audio calling apps. विगतमा, प्रयोग मान्छे परम्परागत फोन वा हैंडसेट को मद्दतले प्रत्येक अन्य जोडिएको गर्न तर फेसटाइम एकदम यो प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छ. अब मान्छे सजिलै फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ, सन्देश र यो फेसटाइम अनुप्रयोगको मद्दत संग पनि भिडियो कल.
पीसी को लागी फेसटाइम डाउनलोड गर्नुहोस्पीसी को लागी अधिक अनुप्रयोग जाँच गर्नुहोस्
This allows your phone to get connected to others viaacellular network or Wi-Fi connection. यो प्रयोगकर्ता आफ्नो मित्रहरुलाई असीमित भिडियो कल गर्न अनुमति दिन्छ, एक समर्थित आइपड संग परिवार र व्यापार सम्पर्क, आईफोन, आईप्याड, म्याक या Windows अनलाइन videotelephony मार्फत.
यो अनुप्रयोग आश्चर्यजनक मान्छे बीच दूरी कम र यो अत्यन्तै आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवन संग सम्पर्कमा रहन सजिलो बनाउन छ.
सुरुमा, स्याउ यसको iOS र Mac OS उपकरणहरूको लागि आवेदन विकास र पछि, यसको लोकप्रियता कारण, यसलाई साथै अब Windows को लागि उपलब्ध छ.
तर यो अनुप्रयोगले तपाईँको सञ्झ्याल मा छ तेस्रो-पक्ष स्थापना आवश्यक. यस लेखमा, हामी Windows मा उपयोग गर्न यस आवेदन stepwise स्थापना साझेदारी गरिनेछ.
तिमी अगाडी यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया हाम्रो लेख पढ्दा जारी. हामी पनि यो अनुप्रयोग सन्दर्भमा केही सूचनात्मक र रोचक डाटा साझेदारी गरिनेछ.
यो लेखको अन्त द्वारा, तपाईं आफ्नो Windows मा आफ्नो मनपर्ने फेसटाइम अनुप्रयोग रमाइलो गर्न सक्षम हुनेछ.
पीसी को लागी फेसटाइम डाउनलोड गर्नुहोस्
Windows को लागि आवेदन:
फेसटाइम अनलाइन भिडियो टेलिफोनी मा coolest भिडियो कल अनुप्रयोगहरू एक बन्ने छ र अन्य सबै विशाल प्रतियोगिहरु जस्तै बाहिर शासन छ गुगल जोडी, स्काइप, WhatsApp, IMO, बिंगो र सूची. अनुप्रयोगलाई यसलाई उच्च गुणवत्ता र लगातार भिजुअल र अडियो परिणाम प्रदान लायक छ जायज.
यो अनुप्रयोग अर्को प्रतिस्पर्धी सुविधा यो प्रयोगकर्ता-अनुकूल इन्टरफेस छ छ. अरूलाई नरम माल बजार सफ्टवेयर कि ब्यान्डविथ प्रदान गर्न असमर्थ छौं.
जारी सफ्टवेयर तेस्रो-पक्ष कम्पनीहरु Windows मा एप्पल आधिकारिक आवेदन स्थापना गर्न सबैको लागि सम्भव बनाउन7वा पछि. अब, यो आईफोन गर्न Windows देखि फेसटाइम गर्न सम्भव छ, आईप्याड गर्न Windows, म्याक गर्न Windows & Windows गर्न Windows.
तपाईं आवश्यक सबै एक लगातार इन्टरनेट जडान छ र आवेदन Windows मा प्रयोग गर्न लागत को पूर्ण निःशुल्क छ.
माथि वर्णन रूपमा फेसटाइम अनुप्रयोग अन्य सबै videotelephony सफ्टवेयर उच्च छ. तस्बिरहरू धेरै धोखेबाज हो र उच्च परिभाषा दृश्यहरू अनलाइन बजार मा उपलब्ध अन्य सबै विकल्प विकल्प एक आकर्षण हो.
फेसटाइम को Coolest सुविधाहरू
FHD- पूर्ण उच्च परिभाषा दृश्य अनुप्रयोगको प्रमुख घटक छ.
A friendly user-interface makes it more interactive for the users
उपयोग तपाईं कहीं र कुनै पनि समयमा जडान गर्न सक्नुहुन्छ असीम हालतमा छ.
तपाईँको सम्पर्क सूची व्यवस्थित गर्न सजिलो
तपाईंको सम्पर्क मनपर्ने सूची तपाईं बस एक क्लिक मा पुग्न मद्दत गर्छ
लागत कल मुक्त जडान रहन अर्को प्लस विन्दु हो.
Group video calling enables you to connect with multiple users at the same time.
पाठ आवेदन सम्भव पनि छ.
स्पैमर्स र महत्वहीन प्रयोगकर्ता लुकाइएको वा सूचीबाट अवरुद्ध गर्न सकिन्छ.
प्रयोगकर्ता पीसी जस्तै विभिन्न उपकरणहरू जडान गर्न सक्नुहुन्छ, विन्डोज, आईफोनहरु, आईप्याड, आइपड, म्याक.
फेसटाइम लागि आवश्यकताहरू:
यी हामी हाम्रो पाठकहरु प्रेम आवेदन अनुभव गर्न भनेर निश्चित हो कि यस्तो आकर्षण हो. यो Windows को लागि एक फेसटाइम अनुप्रयोग स्थापना गर्नु अघि आधारभूत आवश्यकताहरू बुझ्न आवश्यक छ. आधारभूत आवश्यकताहरू समावेश
तपाईंको Windows संस्करण कम्तिमा XP हुनुपर्छ. एक राम्रो अनुभव लागि, हामी तपाईंलाई Windows हुनुपर्छ भन्ने थियो & वा पछि संस्करण.
को सीपीयू गति भन्दा उच्च हुनुपर्छ 1GHz.
को राम न्यूनतम गर्नुपर्छ2जीबी वा माथि.
त्यहाँ एक समर्थित गर्नुपर्छ निर्मित क्यामेरा भिडियो कल लागि वा अरू यो उद्देश्य लागि एक पोर्टेबल समर्थित क्यामेरा फेला.
लागि अडियो कल, तपाईं एक हुनुपर्छ माइक्रोफोन. गोपनीयता फिक्री प्रयोगकर्ताहरूसँग हेडफोन प्रयोग गर्नुपर्छ निर्मित माइक्रोफोन.
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सभ्य छ छ इन्टरनेट जडान.
पहिले कि फेसटाइम एप्पल को एउटा सरकारी अनुप्रयोग हो रूपमा उल्लेख र विकासकर्ताहरूले अझै Windows को लागि कुनै पनि संस्करण जारी छैन मात्र.
त्यसैले तपाईं मात्र APK ढाँचामा आधिकारिक वेबसाइट सबै iOS र म्याक उपकरणहरूको लागि प्रयोग यो अनुप्रयोग प्राप्त गर्न सक्छन्. खुसीको Windows को लागि, हामीले केही कार्यक्रम उपलब्ध अनलाइन तेस्रो-पक्ष कार्यक्रम मार्फत यो स्थापना गर्न छ.
हामीलाई यहाँ हाम्रो पाठकहरु संग साझेदारी गरौं चरण डाउनलोड प्रक्रियाहरु यहाँ द्वारा चरण:
एन्ड्रोइड एमुलेटरहरू तेस्रो-पार्टी विकासकर्ताहरूले विभिन्न ढाँचाहरू स्थापना गर्न जारी गरेका छन्. यी अनुप्रयोगहरू सफ्टवेयर तपाईं चलान गर्न अनुमति दिन्छ APK ढाँचा फाइलहरू तपाईंको Windows मा फेसटाइम को. यसलाई पहिले नै आफ्नो सिस्टम मा स्थापना भएको छ भने, बस प्रक्रिया पालना. को newbies लागि, कृपया दिइएको लिंक बाट BLUESTACKS डाउनलोड:
यो www.bluestacks.com को घर पृष्ठ हो
प्रक्रिया र सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा कानुनी छन् त फिर्ता बस्न र आराम.
फाइल आकार लगभग को ठूलो छ. 469एमबी र यो एक जबकि लिन डाउनलोड गर्न हुनेछ.
पछि यसलाई डाउनलोड छ, यो स्थापना र एक पटक यो गरेको छ, तपाईंको Windows पुनः सुरु.
bluestacks खुला आवेदन सुरु मेनुबाट. यो कार्यक्रम द्वारा प्रदान पहिलो वातावरण र सिंक पूर्वनिर्धारित अनुप्रयोगहरू प्रारम्भ गर्न समय हुनेछ. त्यसैले प्रारम्भिक प्रक्रिया अवरोध छैन.
एक पटक कार्यक्रम सुरु, मेनुमा जानुहोस् र प्ले स्टोर आवेदन क्लिक गर्नुहोस्.
मा प्ले स्टोर, फेला फेसटाइम खोज विकल्प.
अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् "रन"सीधा आवेदन स्थापना. तपाईं पनि गर्न सक्छन् डाउनलोड फाइल बचत तपाईं यसलाई पछि स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने.
जब तपाईं तयार छन् आवेदन स्थापना तपाईंको सिस्टम र निर्देशनहरू पालना.
स्थापना प्रक्रिया चलिरहेको बेला, तपाईं प्रशासक अधिकार को लागि संकेत हुन सक्छ वा प्रशासक पासवर्ड वा पुष्टि. कृपया आवश्यक पासवर्ड टाइप वा जानकारी प्रश्न.
अन्तमा, फेसटाइम तयार छ मा प्रयोग गर्न आफ्नो Windows.
सिर्जना तपाईंको आफ्नै प्रयोगकर्ता आईडी र पासवर्ड र नै जब तपाईंले लग इन गर्न चाहनुहुन्छ प्रयोग गरिनेछ.
जब तपाईं पहिलो पटक अनुप्रयोग चल्नेछ, तपाईं प्रयोगकर्ता आईडी र पासवर्ड प्रविष्ट गर्न प्रेरित गरिनेछ. तपाईंले पहिले नै आफ्नो आफ्नै अद्वितीय प्रयोगकर्ता आईडी र पासवर्ड सिर्जना गरेका रूपमा, यसलाई थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यहाँ आवश्यक हुनेछ. एक पटक प्रारम्भिक अद्वितीय आईडी सिर्जना प्रक्रिया गरिन्छ, मुख्य इन्टरफेस प्रदर्शित हुनेछ.
सबै सम्पर्क थप, लुकाइएको वा अवरुद्ध मुख्य इन्टरफेस नियन्त्रण गर्दै. प्रति आवश्यकताहरु आफ्नो रूपमा अनुकूलन गर्न सेट प्राथमिकताहरू जाने. आईफोन जस्तै, आईप्याड, आइपड & म्याक, तपाईं पनि प्रदर्शन सेटिङ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ तपाईँले स्क्रिन तिमी घुमाउन छैन तर तपाईं उपलब्ध विकल्पहरू केही परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं पहिलो पटक फेसटाइम प्रयोग र चाहन्थे भने थप यसको बारेमा जान्न, तपाईं पनि केही विस्तृत जानकारी को लागि आफ्नो समर्थन वेबसाइट भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ. लिङ्क तल दिइएको छ:
भूमण्डलीकरणले संसारभरका मानिसहरूलाई अधिक प्रदर्शन र प्रगतिहरूको लागि मद्दत गरेको छ. फेसटाइम एक बियर वा मग हथियाने बारेमा छ र आफ्नो मित्र र परिवारका साथ यो प्रत्यक्ष साझेदारी मात्र.
यो प्रत्येक अन्य संग सम्पर्कमा रहन व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय बजार मदत गरेको छ.
निरन्तर स्याउ राम्रो परिणाम लागि फेसटाइम को नयाँ संस्करण जारी छ र विशेष गरी प्रयोगकर्ता आवश्यकताहरू खानपान.
Download Easy Poser for PC Windows 7,8 र 10
पीसी विन्डोज को लागी Directv अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् 10, 8 & 7